Koobka koobabka Shiinaha & soosada ayaa la dhigay, 90cc Espresso glass Cups oo leh Suugooyin, koobabka leh Golden Handle, oo loogu talagalay Espresso iyo kafee, suxuunta dhalaalaysa oo leh soosaarayaasha koobka dhalooyinka iyo alaab-qeybiyeyaasha | FUXINGYE
koob koob & soosada la dhigay, 90cc Espresso glass Cups oo leh Suugooyin, koobabka leh Golden Handle, oo loogu talagalay Espresso iyo kafee, suugada dhalaalaysa oo leh koob dhalo ah
Qaab dhismeedka: go'an 2, go'an 4 go'an 6 iwm
GLASS ESPRESSO SET AYAA KA MID AH: koobabka muraayadda espresso oo leh weel qaabeysan oo nadiif ah ama suug midab leh ama weel la shiilay, midkiiba 90 koob oo kafee ah iyo 4,5 inji dhanaan. Koob kasta oo espresso ah wuxuu hayaa 90cc (isagoon ka buuxin dusha sare). Ku filan balaastikada maalinlaha ah iyo kafeega.
KHUDBADDA SARE EE LAFAHA SHIINAHA IYO MUUQAALKA: Koobabka muraayadda espresso ee leh lafaha cusub ee shiinaha ayaa lagu farsameeyay tayo sarre leh oo loogu talagalay nabadgelyadaada iyo nabadda maskaxdaada, LEAD-FREE, NON-TOXIC, jab u adkaysta oo aad u adag.
KU DHAQAN AH OO KU HESHIISAN: Iyada oo leh koob koob fudud, fartaadu si fudud ayey u dhex mari kartaa, oo ku habboon in la haysto. Waxaad karisay suugada jajabka ah ee leh wareega wareega si fudud si aad uhesho koobkaaga kafeega, qaadada qaxwada, sonkorta ama baakadka caanaha.
MULTI-ISTICMAAL: Koobka kafeega iyo suugada la dhigo ayaa ku habboon espresso iyo kafee. Ku raaxee espresso-kaaga madadaalo iyo waqti aan qurxooneyn oo naqshadeynta koobabka demitasse ah.
HADIYAD SHARAF LEH: Koobka Shaaha iyo Suugada ayaa ahaa mid qurux badan oo si ammaan ah loo soo baakadeeyay. Oo leh midab soo jiidasho leh iyo midab gaar ah, waa hadiyad wanaagsan oo asxaabtaada iyo qoyskaaga ah oo ku saabsan Housewarming, xafladda arooska, Maalinta Hooyooyinka, Maalinta Aabbayaashood, Kirismaska ​​iyo Maalinta Sannadka Cusub.
Ku raaxayso noloshaada, Ku raaxayso waqtiga kafeega ah annaga galaas koobabka iyo suugada!
Ku raaxayso galab qurux badan!
Isticmaalka koobabka espresso iyo soosaska, sida cabbitaanka kafeega macaan ee dukaan kafeega heerka-sare ah. Koobka Espresso iyo sooska waxaa lagu qurxiyay dahab dhalaalaya oo dhalaalaya iyo macmacaan jilicsan, xulasho ku habboon waqtigaaga kafeega galabtii. waxay hagaajin kartaa tayada nolosha shaqsiyaadka, waxaadna ku raaxeysan kartaa jawiga dabiiciga ah ee xarrago dabacsan.
Koob kasta oo espresso / bun ah wuxuu hayaa 90cc ama 150ml, (isagoon ka buuxin dusha sare), oo loo dhigay 4 ama set 6. waxay ku fiican yihiin espresso iyo kafee.
Waa maxay hadiyad weyn oo feker ah oo loogu talagalay dhalashada asxaabta, Kirismaska, Maalinta Thanksgiving iyo maalmo kale oo xusuus leh. Waxay aad ula dhacsan doonaan himilooyinkaaga runta ah iyo fikradaha wanaagsan.
Si fudud loo dhaqo.
Si fudud ayaa loogu nadiifin karaa biyaha socda.
Kuma jiraan sunta rasaasta iyo waxyeellada kale ee jidhka bini'aadamka.
Waxyaabaha: Muraayadaha Darajada Sare iyo shiinaha lafta cusub
Midab: badan iyo dahab
koob galaas espresso ah oo leh gacmo dahab ah, Dia: 5.8cm H: 8.8cm, Awood: 90ml
espresso van cleef sauces: Dia 14cm H 1.5cm, sooska glaze sorista: Dia 11.5cm H 1.8cm, sooska lagu qurxiyo espresso: Dia 11.8cm H 1.8cm
koobka dhalada ee loo yaqaan 'espresso / coffee coffee' oo aan gacanta lagu hayn, Dia: 5.8cm H: 9.2cm, Awood: 150ml
Shahaadooyinka: FDA, SGS, LFGB, iwm
Xirxirida: sanduuqa bunni ee daboolka PET, sanduuqa midabka, sanduuqa hadiyadaha iwm
Waqtiga tusaalaha ah: Muunadda sheyga ayaa diyaar noqon doonta qiyaastii 15 maalmood ka dib bixinta la xaqiijiyay.
Waqtiga hogaaminta wax soo saarka: Waxaan ku dhammeyn karnaa wax soo saarka sheyga qiyaastii 45-60 maalmood oo shaqo ah.
Hore: Naqshadeynta Caangaarka ah ee Caannada Carruurta ugu fiican iyo waxyaabaha hadiyadaha ah
Xiga: koobka dhoobada & soosada la dhigay, 90cc Espresso Cups oo leh Suugooyin, koobabka leh Golden Handle, oo loogu talagalay Espresso iyo kafee, koobka lafaha cusub ee shiinaha iyo suugada
Koobabka Coffee oo leh Suugooyin
Koobka Badbaadada Koobka
Shaaha Cup Saucer Set
Koobkii Iyo Badbaado
koob dhoobada & soosada dhigay, 90cc Espresso Cu ...
Van Cleef wuxuu qaabeeyaa lafo cusub shiinaha Espresso cup ...
koob dhoobada & soosada dhigay, koobabka leh Golde ...